News - Tilmaamaha shaqada badhanka xakamaynta ciyaarta
1. Bateriga waxaa lagu rakibay jeexdin dhexda iyadoo loo eegayo tirarka togan iyo kuwa taban. Ka dib marka la isku xiro, badhanka gacanta ayaa iftiimin doona;
2. Ku xidh USB-ga bilaa-waayirka gacanta ee sanduuqa oo bilow.
Waxaad soo dejisan kartaa qaar ka mid ah ciyaaraha la midka ah hoolka ciyaarta, sida goobta ciyaarta, haddii gacanta lagu habeeyo ciyaarta, waxaad isticmaali kartaa gacanta si aad u shaqeyso. Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa ciyaaraha internetka oo isku day inaad adigu rakibto. Heerka la qabsiga iyo badhamada ciyaar kastaa way kala duwan yihiin, badhamada hawlgalkana ma aha labis.
Furaha AUTO: Marka la ciyaarayo ciyaaraha dagaalka, waxay ciyaaraysaa doorka SII SOCO, taas oo ah, way sii wadi kartaa ciyaarta;
Furaha TURBO: waa furaha dilaaca, waxaad hoos u dhigtaa furaha TURBO ka dibna riix mid ka mid ah 1, 2, 3, 4, ka dib furahaan waxaa lagu qeexay inuu dillaacay;
Furaha CLEAR: waa furaha lagu joojinayo dilaaca, yacni, taabo CLEAR ka dibna furaha lagu qeexay furaha dilaaca si aad u tirtirto dilaaca; Badhanka AUTO: waxa kale oo loo isticmaali karaa badhan dilaac toos ah; Xulo iyo furayaasha START: guud ahaan waxay u dhigmaan furayaasha 9,10;
Badhamada ANALOG iyo MODE: Guud ahaan waxaa jira laba qaab oo isteerinka ciyaarta ama gamepad-kayaga ah: qaabka dhijitaalka ah (DIGITAL) iyo qaabka analoog (ANALOG). Riix badhanka Mode si aad u bedesho habka hawlgalka: iftiinka cas ee gacanta ayaa shid si uu u muujiyo qaabka analoogga, kaas oo ku habboon ciyaaraha u baahan saxnaanta sare sida tartanka iyo toogashada; nalka cas ee dami wuxuu muujinayaa habka dhijitaalka ah, kaas oo ku habboon ciyaaraha u baahan saxnaanta hoose sida dagaalka;
Badhamada 11 iyo 12 ee ciyaartapad: si toos ah u riix joysticks bidix iyo midig ee 11 iyo 12 badhamada, badhanka 11 ee bidixda iyo badhanka 12 ee midigta.